Marka aad qorshaynayso safarka Europe, aad wajahay fursado aad u badan! meelaha aan dhammaadka lahayn iyo waayo-aragnimada, that you could travel for years and still feel like you’ve missed something essential. This can lead to making the mistake of over-committing, oo seegay faahfaahin yar in loo sameeyo safarka iyo safarka tareenka si sixir. Waxaan halkaan u joognaa in aan kuu sheego waxa aan waa in aad samayn iyo Sidee si ay u qorsheeyaan safar in Europe, ka bilow ilaa iyo dhamaad!
Ka hor inta aadan la kulmi karaan Tapas Spanish dhab ah, piazzas ee Rome ama warami terraces in Prague, qayb muhiim ah oo loo baahan yahay admin! Si fudud u gelin, ayaa in ka badan diyaariyey aad tahay marka aad qorshaynayso safarka Europe, fursadaha weyn aad oo xiiso leh iyo safar stress-free in kor ku nool in aad ka filayso.
Sidaas halkan waa caarada Save A tareenka: dooran shan top, waa-dos tacabur in Yurub! Waxaa laga yaabaa in uu cabo ee Hofbrauhaus in Munich, ama qaadashada safar kanaalka in a Amsterdam, ama baadhaya David-ka xaglo badan – in Florence. Wax kasta oo ay tahay, calaamadee kuwa hoos iyo qorsheeyo aad safar ku wareegsan. Doorbidaa by tareenada.
Sida ku xusan ka hor, waa ay fududahay in ka badan samayn oo isku day cadaadi in aad u badan. Waa gebi ahaanba la fahmi karo. fasaxa qaali aad u baahan tahay in si fiican looga faa'iideysan, sidaas darteed waa u fududahay in ay isku dayaan in ka badan-santuuq itineraries marka uu qorsheynayay safar uu in Europe. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay noqon kartaa qaali (in aan ku xuso daal), sida badan-xirxiraan safarada la dalal aad u badan in aad dhowr maalmood keenaysaa in waqti dheeraad ah oo ay marti ahaayeen, iyo gaaska ama ka badan tigidhada tareenka. Xaaladaha xad-dhaaf ah, waxaa lagu arbushayo kartaa safar, waxaa galay isku dari kara ka mid ah hotel jeeg-tago iyo hubi dheceen (la xirxirida joogto ah iyo unpacking), halka daawashada tartanka ah marna-booqday muuqaalka ee la soo dhaafay daaqadaha tareenka. Haddii ay suurtagal tahay, hoos. Waxaad arki doonaa badbaadin gaadiidka oo ay helaan waqti dheeraad ah si ay u sahamiyaan meelaha aad.
Taladayadu waxay tahay in madax isla markiiba si ATM marka aad timaado Yurub iyo ka baxaan lacag caddaan ah oo isticmaalaya kaadhka ATM aad. Waa wax iska fudud, iyo sarrifka in aad hesho xawilaada waa hubaal ka wanaagsan yahay heerka wax xataa innagu waan helay bangiyada guriga. Wac bangiga ka hor inta aadan ka tegin si aad u weydiiso oo ku saabsan kharashka caalamiga macaamil ATM, iyo sidoo kale ka warrami in aad isticmaalayso kaarka dibadda. Haddii aadan u sheeg, waxaa ku baraarujinaynaa Ummado hortood inaad ku qabaa inay khiyaamo, iyo xannibi doono kaarka. Sidoo kale, weydii haddii aad bankiga leeyahay goobaha caalamiga ah ama iskaashi la degaanka bangiyada Yurub.
Wac side marka aad dhameystiran si ay u qorsheeyaan safar Yurub oo heli i qorshef aad qorsheyneysid inaad isticmaasho telefoonka, ka dibna u hubiso in aad dhigay aad telefoonka ah si looga fogaado eedeeyay xogta shil (oo kooban: dami xogta gacanta iyo xaddido tirada apps in isticmaali kartaa xogta gacanta). Oo, sida qorshe, eekaan oo lacag la'aan ah shabakadaha Wi-Fi u duuban iyo diraya emails, hubinta Web ah iyo isticmaalka apps. Europe ayaa goobaha badan wifi, si aadan u noqon doonaa ee soo xiriiri muddo dheer. Haddii kale, iibsato kaarka SIM ah aad telefoon marka aad u hesho in ay Europe.
Users bilaabi by gaaray magaalo si ay u bilaabaan iyo kaalinta (hadda, waxaa lagama maarmaan ah si ay u bilaabaan oo ay joojiyaan safarka in meel ka mid ah). Ka dibna dooro taariikhda departure, goormaa safar noqon doono iyo sida badan meelaha oo ay ku jiraan. Users sidoo kale dooran kartaa haddii ay doonayaan in ay eegaan magaalooyinka Yurub, Midowga Yurub ama Zone Schengen. app ayaa markaas abuuri doonaa faahfaahin ah, buuxiso heerka Airbnb magaalo kasta, kuwa on miisaaniyad.
Travlelers can use website-ka Eightydays or the newly launched macruufka app to plan their European voyages.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit leh link si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/plan-trip-europe/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)